ပေါ်တူဂီခရီးသွားသတင်း | eTurboNews
ပင်မစာမျက်နှာ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ » ပေါ်တူဂီကြားဖြတ်သတင်း
အမျိုးအစား - ပေါ်တူဂီ Breaking News
ပေါ်တူဂီခရီးသွားများနှင့်ခရီးသွားကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလာရေးသတင်း။ ပေါ်တူဂီသည်စပိန်နိုင်ငံနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောအိုင်ဘာရီယန်ကျွန်းဆွယ်တွင်ဥရောပတောင်ပိုင်းဖြစ်သည်။ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၏တည်နေရာသည်၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှု၏ကဏ္aspectsများစွာအပေါ်သြဇာသက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဆားကော့နှင့်ကင်ဆန်ဒတို့သည်အမျိုးသားဟင်းပွဲများဖြစ်သည်။ Algarve ကမ်းခြေသည်အဓိက ဦး တည်ရာနေရာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံ၏ဗိသုကာအများစုမှာပေါ်တူဂီ၏ပေါ်တူဂီအင်အားကြီးသည့် ၁၅၀၀ - ၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်များအထိဖြစ်သည်။ ။
Lufthansa Group လေကြောင်းလိုင်းများသည် US၊ Spain၊ Portugal နှင့်...
ဥရောပတွင်၊ စပိန်ပြည်မကြီးနှင့် Canary ကျွန်းများ၊ ပေါ်တူဂီနှင့်အခြားနေသာသောနေရာများ...
TAP ၏ မြောက်အမေရိကဝင်ပေါက် ၁၀ ခုတွင် လက်ရှိတွင် Boston၊ Cancun၊ Chicago၊ Miami၊ Montreal...
New York (JFK) မှ Funchal (FUN) သို့ အပတ်စဉ် ပျံသန်းမည့် SATA Azores လေကြောင်းလိုင်းမှ...
ပေါ်တူဂီသည်အမေရိကန်ခရီးသွား negative ည့်သည်များအား COVID ဖြင့်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် ...
TAP Air ပေါ်တူဂီကကြယ်လေးပွင့် COVID-19 လေကြောင်းလိုင်းကိုလက်ခံရရှိသည်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်ကောင်းလာမည်မဟုတ် - UNWTO, WHO, EU
TAP Air Portugal သည်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုနှင့်ချီကာဂိုသို့ပြန်လာသည်
TAP Air Portugal သည်မြောက်အမေရိကသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိ ...
Emirates သည်၎င်း၏ကွန်ယက်ကိုနေရာ ၇၀ သို့တိုးချဲ့သည်
TAP Air Portugal သည်မြူးနစ်မှလစ္စဘွန်းသို့ပျံသန်းမှုများကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်
TAP Air ပေါ်တူဂီမှမရပ်မနားဝန်ဆောင်မှုစတင်
TAP Air Portugal လေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်ဝက်နီးပါးပြန်လည်စတင်ရန်စီစဉ်ထားသည်
TAP Air ပေါ်တူဂီသည် US မှမရပ်မနားပျံသန်းမှုအသစ်စတင်
လစ္စဘွန်း၏ 'Renda Segura' အစီအစဉ်သည်ပြproblemနာဖြစ်နိုင်သည် ...
၂၀၂၀ နွေရာသီအတွက်အလုံခြုံဆုံးအပန်းဖြေခရီးသွားနေရာများ ...
TAP Air Portugal သည်မြောက်အမေရိကဝန်ဆောင်မှုကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်
၀ န်ကြီး - ခရီးသွား Portugal ည့်သည်တွေကိုပေါ်တူဂီနိုင်ငံမှာကြိုဆိုပါတယ်
အရှိန်မြှင့်ရန်ပေါ်တူဂီသည်မကြာမီတွင်ဗြိတိန်ခရီးသွား ists ည့်သည်လိုအပ်သည်။
လာရောက်လည်ပတ်သည့်အခါပေါ်တူဂီ Incredible အိန္ဒိယနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်
Air France နှင့် Sata Azores လေကြောင်းလိုင်းများသည် codeshare လက်မှတ်ထိုး ...
Cabo Verde လေကြောင်းလိုင်း - လစ္စဘွန်းလေဆိပ်သို့ပို့ရန်လမ်း
ပေါ်တူဂီကကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်မှုအများဆုံးကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ...
Destination: Trancoso နှင့် Belmonte, Portugal
ခရီးသွား be ည့်သည်များသတိပြု: ပေါ်တူဂီစီးကရက်အပေါ်စစ်ကြေငြာ ...
Emirates သည်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကို Porto သို့စတင်ခဲ့သည်
TAP Air ပေါ်တူဂီမှအသစ်တင်ပို့မှု ၇၁ ခုနှင့်အတူ
ပေါ်တူဂီဘတ်စ်ကားပျက်ကျမှုတွင်လူ ၂၈ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီးဂျာမန်ခရီးသွားများ
ခရီးသည် ၅၅.၉ သန်း - ခရီးသည်များ ...
UNWTO သည်လစ္စဘွန်းရှိမြို့များကို ...
TAP Air Portugal သည်၎င်း၏ပထမဆုံး A321LR အတွက်ဖဲကြိုးကိုဖြတ်တောက်သည်
TAP Air Portugal ပျံသန်းသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။